एक खेलाडी ! एक जादुगर !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
विवादास्पद हातेगोलले क्वाटरफाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई हराएपछि अर्जेन्टिनी रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालीलाई थप दंग पार्दै उनले भने, ‘इङ्ल्यान्डजस्तो चोरको देशलाई ढाँट्दा ईश्वरले पनि सयपटक माफी दिन्छन्, मैले अझै ९९ पटक ढाँट्न बाँकी छ । त्यसमाथि इङ्ल्यान्डलाई फुटबलको मैदानमा हराउन सजिलो छ, किनभने त्यहाँ गोर्खाली हुँदैनन् ।’
मंसिर १३, २०७७ मुकुन्द दाहाल
गोरु बेचेको साइनो पनि गाँसिएको थिएन, अर्जेन्टिनासँग नेपालको । इंगल्यान्डसँगको सदियौं पुरानो सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध जहिले पनि न्यानो मानियो । फुटबलको मैदानमा भने नेपालीको साइनो अर्जेन्टिनासँग बढी जोडियो, इङ्ल्यान्डसँग कम । नेपाली र अर्जेन्टिनीबीच साइनो बाँध्ने लमी बने फुटबलका महानायक डिएगो अर्मान्डो म्याराडोना । उनै सूत्रधार बुधबारदेखि सदाका लागि अस्ताए । उनको निधनमा नेपालीहरूको भिजेको परेलीले प्रस्ट पारेको छ, म्याराडोनाले जोडेको दुई देशबीचको साइनो कहिल्यै पनि नझुक्ने गरी सगरमाथाझैं अग्लो रहिरहनेछ ।
निश्चय नै फुटबल विश्वको साझा र सरल भाषा हो । यही साझा भाषामा जादुमयी शब्दहरू थप्ने पेलेपछिका अर्का जादुगर बने म्याराडोना र फुटबलको शाश्वत लोकप्रियतालाई थप चुचुरोमा पुर्‍याए । फुटबल भनेपछि हुरुक्क हुनेमा नेपाली पनि पर्छन् । विश्वकप फुटबलको पहिलो प्रत्यक्ष प्रसारण आम नेपालीले नेपाल टेलिभिजनबाट हेर्न पाए, त्यो पनि म्याराडोनाको उदय भएको वर्ष सन् १९८६ को मेक्सिको विश्वकपदेखि ।
पहिलोपटकमै म्याराडोनाको चमत्कार र उपाधिमाथि अर्जेन्टिनाको कब्जा देख्न पाएका नेपालीको मन म्याराडोनाले चोरेरै छाडे । विवादास्पद हातेगोलले क्वाटरफाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई हराएपछि अर्जेन्टिनी रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालीलाई थप दंग पार्दै उनले भने, ‘इङ्ल्यान्डजस्तो चोरको देशलाई ढाँट्दा ईश्वरले पनि सयपटक माफी दिन्छन्, मैले अझै ९९ पटक ढाँट्न बाँकी छ । त्यसमाथि इङ्ल्यान्डलाई फुटबलको मैदानमा हराउन सजिलो छ, किनभने त्यहाँ गोर्खाली हुँदैनन् ।’ फकल्यान्ड युद्धमा अर्जेन्टिनाले गोर्खालीको उपस्थितिमा भोगेको अपमानजनक पराजयपछि वास्तवमा ठूलो बदला थियो मेक्सिको विश्वकपको क्वाटरफाइनलको २–१ को नतिजा ।
१९८६ पछि म्याराडोनाले १९९४ को विश्वकप खेल्दासम्म अर्जेन्टिना र इङ्ल्यान्डको भेट भएन । यसपछि भएको भेटमा पनि नेपालीको समर्थन अर्जेन्टिनालाई बढी र इङ्ल्यान्डलाई कम हुँदै आएको छ । १९९८ को फ्रान्स विश्वकप नै यसको उदाहरण बन्यो । राउण्ड १६ को खेलमा पेनाल्टीमा इङ्ल्यान्डमाथि अर्जेन्टिना ३–४ ले हाबी हुँदा ताली नेपालीले उही म्याराडोनाको टोलीको पक्षमा नै बजाए । कस्तो अवस्थासम्म आइपुग्यो भने समूहमा बसेर टेलिजिभनमा अर्जेन्टिना र इङ्ल्यान्डको खेल हेर्दा इङ्ल्यान्डको पक्षमा हुटिङ गर्नेहरूले कुटिनुपर्‍यो । खेल पूरा नहुँदै भाग्नुपर्ने पनि भयो । लाहुरे बनाउनेदेखि नेपालीसँगको सदियौं पुरानो सम्बन्धका कारण निश्चय नै इङ्ल्यान्डसँग नेपालको भावनात्मक सम्बन्ध छ । तर, नेपाली र अर्जेन्टिनाको साइनो बाँध्ने मियो बनेका म्याराडोनाले यति बलियो डोरीले सम्बन्ध गाँसेका रहेछन्, त्यो हम्मेसि चुँडिने सम्भावना कहीं देखिँदैन ।
१९९४ मा अमेरिकामा भएको विश्वकपमा अमेरिकाको किलकिलेमा अड््किएको हड्डी बनेका क्युबाली नेता फिडेल क्यास्ट्रोको ट्याटु पाखुरामा खोपेर उत्रिएका म्याराडोना आकर्षणका पात्र थिए सबैका लागि । तर, ट्याटुलाई कसिंगर ठानिसकेको अमेरिकाले यी जादुगरको कला पस्कने खुट्टामा कोकिन प्रयोग गरेको अभियोग लगाएर काँटी ठोकिदिएपछि म्याराडोना खेलबाट वञ्चित बने । फलतः अर्जेन्टिना अन्तिम १६ को खेलभन्दा अगाडि बढ्न सकेन । म्याराडोनामाथिको
अभियोगलाई थाहा छैन अर्जेन्टिनीहरूले कसरी लिए, तर नेपालीहरूका लागि भने षड्यन्त्रको सबभन्दा कुरूप चाल बन्यो र लाग्यो काठमाडौं उपत्यकादेखि देशभरका सहरहरूमा ‘अमेरिकी षड्यन्त्र मुर्दावाद’ को नारा । भित्ता भित्तामा अक्षरहरू पोतिए– तिमीमाथिको षड्यन्त्रविरुद्ध हामी पनि तिमीसँगै उभिएका छौं, म्याराडोना ।
एक खेलाडी, एक अम्मली !
८० को दशकमा विश्व फुटबलमा एकछत्र राज चलाएका म्याराडोनालाई एकपटक एक सञ्चारकर्मीले सोधेछन्, ‘कति कमायौ फुटबलबाट ?’ कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न माहिर म्याराडोनाको जवाफ थियो, ‘स्वर्ग भन्ने नाम सुनेको छु देखेको छैन । तर, त्यो स्वर्ग कसैले देखाइदिए त्यही स्वर्ग किनेर मेरो बाबु आमा र परिवारलाई त्यहीं लगेर राख्थेँ ।’ यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ, उनको कलाले कति कमाएको थियो !
धेरैका लागि प्रिय म्याराडोनाको अप्रिय विषय थियो– लागूऔषधको अत्यधिक सेवन । यो दुर्व्यसन रोक्न उनी आफैंले र उनको परिवारले धेरै प्रयास गरे । उनका करोडौं प्रशंसकको पनि उनीसँग बारम्बार यही आग्रह हुन्थ्यो । तर, न म्याराडोना सुध्रिए न प्रशंसकहरूको आग्रह नै थामियो । २००२ मा एसियाली महाद्वीपमा पहिलोपटक भएको विश्वकपमा जापानले उनलाई लागूऔषध दुर्व्यसनी भनेर भिसा दिन अस्वीकारसमेत गरेको थियो । हक्की म्याराडोनाले त्यहाँ पनि आफ्नो मुखलाई रोकेनन् । उनको प्रश्न थियो, ‘हिरोसिमामा आणविक बम त अमेरिकाले खसालेको हो मलाई भिसा नदिनुपर्ने कारण के छ ?’
अन्ततः उनको खेल जीवनलाई मात्र नभई समग्र जीवनलाई नै बर्बाद पार्ने माध्यम लागूऔषध बन्यो । ६० वर्षको उमेरमै उनलाई धर्तीबाट बिदा गर्ने काल यही लागूऔषध बन्यो ।
म्याराडोना भनेपछि युवतीको लस्कर लाग्थ्यो । युवतीप्रतिको उनको आसक्ति पनि उनलाई बदनाम बनाउने माध्यम बन्यो । बार्सिलोनाबाट खेल्दा वार्सिलोनाको एक वेश्यालय ‘रिजर्भ’ नै गरेर हप्तौं एक्लै बस्नु उनलाई बदनाम बनाउने सबैभन्दा श्रेष्ठ पक्ष बन्यो, जसले उनको बार्सिलोना बसाइलाई छोट्याएको थियो । उनका कति सन्तान छन् भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । केहीअघिसम्म आफु म्याराडोनाको सन्तान भएको दाबी गर्न आउनेको संख्या पनि उत्तिकै थियो ।
म्याराडोनालाई सन्की मान्छको रूपमा चिन्ने पनि कम छैनन् । शताब्दीको महान् फुटबलर घोषणा गरिंदा पनि आफू र पेलेलाई समान स्थानमा राखिएकोमा चरम असन्तोष जनाउँदै उनले आफ्नो महानता पेलेभन्दा माथि रहेको बताएका थिए । यस्ता अवगुणले उनको गुणलाई होच्याउने काम गरे पनि आफ्नो जादुमयी खेलले सबैको मन जितेका म्याराडोनाको यही महान् गुणलाई सबैले सम्मान गर्दै आएका छन् ।
निश्चय नै ब्राजिलका पेलेको पुस्तापछिका निर्विकल्प महान् फुटबल खेलाडी हुन् म्याराडोना । यी दुईको खेलमा धेरै समानता पाइन्छ पनि । यद्यपि, आफ्नो मुलुकलाई उपाधि दिलाउने विषयमा भने यिनी पेलेभन्दा पछाडि नै रहे । शारीरिक उचाइ धेरै थिएन म्याराडोनाको तर विश्व फुटबललाई अकल्पनीय उचाइ प्रदान गरे । अत्यन्तै लय मिलाएर दौडने होचो कदका यी छरिता खेलाडी अब सदाका लागि बिदा भएका छन् । विश्वभरका करोडौं खेलप्रेमीलाई एकैपटक रुवाएर अस्ताएका म्याराडोनाको जादु नमेटिने गरी विश्व फुटबलको इतिहासमा सुरक्षित रहनेछ जुगौंजुगसम्म ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७७ ०९:०३